Farta Asalka ah ee Ciwaanka: Farta ugu Fiican ee Magacyada Waaweyn | Hal-abuurka khadka tooska ah
Nerea Morcillo | 08/05/2022 17:00 | Fuentes, Khayraadka
Qaar ka mid ah naqshadaha ugu fiican waxay ka samaysan yihiin qoraallada ugu fiican. Lamana filayo in wejiyadani ay matalaan wadar ahaan matalaaddan. Haddii aad u heellan tahay adduunka farta iyo naqshadaynta qoraalka, tani waa boostada aad shaki la'aan raadinaysay.
Qoraalkan, kaliya uma aanan imaan inaan kaala hadalno qoraalada ku habboon mashruucaaga, laakiin sidoo kale, Waxaan ku tusi doonaa qaar ka mid ah qoysaska ugu caansan, habkan, waxaad ogaan doontaa noocyada kala duwan ee jira, si aad hadhow ugu isticmaasho naqshadahaaga.
Shakiga ha la joogin oo nala joog ilaa aakhirka.
1 qoysaska font
1.2 Ul qallalan
1.3 La calaamadeeyay
2 Tusaalooyinka xarfaha cinwaannada
2.9 soo jiidasho
2.10 Poiret mid
Source: Noocyada leh dabeecadda
Marka aan ka hadlayno qoysaska farta, Waxaan ka hadalnaa sida xarfaha loo qaybiyo ama loo qaybiyo naqshad ahaan. Tusaale ahaan, wejiyada qaar ayaa kuwa kale kaga duwan qaab-dhismeedkooda, ama kuwo kale, dhanka kale, maxaa yeelay waxay gudbiyaan.
Waxaan ka bilownaa kooxda ugu muhiimsan, koox taas waxa loo qaybiyaa afar qaybood oo waaweyn iyo in qaybahaas, ay u kala qaybsan yihiin kuwo kale. Jaleecada hore, waxay u ekaan kartaa adduun aan dhammaad lahayn, laakiin waxaan ballan qaadaynaa inay si dhakhso ah u dhammaan doonto.
Waxay ahaayeen 4-tii qaybood ee ugu horreysay xarfaha, hadda waxaynu eegaynaa qaybaha farta noocaan ah loo qaybiyay.
Kooxda Roomaanka dhexdeeda waxaan ka helnaa shan qaybood ama noocyada Roomaanka
Roomaanka sidoo kale Waxaa loo yaqaannaa waji-qoraalka serif. sababtoo ah waxay ka kooban yihiin serif aad loogu dhawaaqo qaababkooda. Waxay leeyihiin naqshad dhaqameed oo cadaalad ah, maadaama ay ahaayeen farriimaha ugu horreeya ee la naqshadeeyay, gaar ahaan waqtiyadii Roomaanka, oo lagu xardhay dhagax.
Aad bay faa'iido u leeyihiin haddii aad raadinayso muuqaal caadi ah oo culus. Intaa waxaa dheer, waxay badanaa fahmaan 95% qoraallada socodsiinta ee buugag badan ama cinwaanno badan, sababtoo ah kala duwanaanshahooda sare ee akhriska.
Haddii aan ka hadalno xarfaha sans-serif waxaynu helnaa laba qaybood oo waaweyn
Wajiyada Sans-serif sidoo kale Waxa loo yaqaan sans serif typefaces. taas oo ka duwan kuwii Roomaanka, waxay ku sifoobeen sababtoo ah kuma jiraan serif calaamadsan naqshadahooda.
Waa wejiyo qoraal ah oo waliba u taagan muuqaalkooda cusub iyo kuwa hadda jira. Waxay leeyihiin dabeecad cadaalad ah oo fudud waxaana sidoo kale loo arkaa weji qoraal ah oo la akhriyi karo. Isticmaalkeeda ayaa lagu muujiyey cinwaannada waaweyn iyo kuwa sare labadaba, iyo sidoo kale qoraalka orodka ah.
Qaybta calaamadeysan waxaan ku helnaa saddex qaybood oo kale:
Xarfahaas waxaa lagu gartaa sidoo kale in lagu yaqaan ama loogu magac daray far-gacmeed ama qoraal. Muuqaalkoodu wuxuu ka dhigayaa kuwo aad u hal abuur leh ama farshaxan. Isticmaalkeedana waxa kaliya oo laga soo qaatay cinwaannada waaweyn ee cinwaannada, maadaama aysan ahayn farta la akhriyi karo ee qoraalka lagu socodsiinayo. Waxa kale oo inta badan lagu dabaqaa naqshado sida boodhadhka ama waraaqaha boostada ee xafladaha qaarkood.
Ilaha qurxinta waxaan ka heleynaa laba kooxood oo waaweyn:
Shaki la'aan waa farshaxanka ugu badan, maadaama ay ku xiran tahay sida loo naqshadeeyay waxaa laga soo saari karaa noocyo gaar ah ama noocyo mashruuc oo kala duwan. Mid ka mid ah caddaymaha caanka ah waa astaanta Disney.
Tusaalooyinka xarfaha cinwaannada
Governos waxaa loo arkaa mid aad u hal abuur leh oo soo jiidasho leh sans serif typeface, taasoo keentay kicinta iyo kicinta dhismooyinka qaar ee qaar ka mid ah dukaamada Miami, oo wakhtigaas lagu matalay naqshad sida Art Deco.
Waxa loo tixgaliyaa in ay tahay far saaxiibtinimo cadaalad ku dhisan iyadoo ay ugu wacan tahay qaababkeeda iyo naqshadeeda. Intaa waxa dheer, waxa uu ka kooban yahay dhumuc aad u badan oo u beddela qoraal u gaar ah oo loogu talagalay mashruucyo firfircoon oo shakhsi ahaaneed. Shaki la'aan, haddii aad raadinayso qoraal aad rabto inaad ku soo jiidato dareenka, tani waa shaki la'aan farta la tilmaamay.
Farta: Farta Dabagaale
Suprema waxay u badan tahay inay tahay wejiga ugu quruxda badan ee joomatari ee maktabadda oo dhan ee aan ku tusi doonno. Waxay aad ugu egtahay Futura caanka ah ee Paul Renner, mana aha taas, waxay ku siinaysaa muuqaal aad u qurux badan oo saaxiibtinimo leh naqshadahaaga. Dhinac kale oo si weyn u tilmaamaya far-qoraalkan ayaa ah in uu leeyahay cabbir sare oo la akhriyi karo, taas oo ka dhigaysa far ku habboon nooc kasta oo qoraal ah. Ha joogin adigoon isku dayin nooca font, maadaama ay tahay wax hal abuur leh oo wax walba ka sarreeya mid aad iyo aad u asal ah oo soo jiidasho leh.
Ku soo dhawoow qof walba qoraalka mustaqbalka ama booska. Waa qaab-qoraalka, taas oo ay ugu wacan tahay naqshadeeda, loo tixgeliyo mid ka mid ah kuwa ugu casrisan iyo kuwa casriga ah. Intaa waxaa dheer, waxay ka kooban tahay xariijimo aad u fiican oo gebi ahaanba ku habboon oo loogu talagalay akhrinta. Waxay caadi ahaan si fiican isugu geysaa warbaahinta sida boodhadhka, xitaa aqoonsiga shirkadda, maadaama ay nashqaddeedu tahay mid hal-abuur leh oo shakhsi ah oo lagu matalo calaamadaha. Haddi aad wali raadinayso qoraal ka dhigi doona mashruucyadaada mid fudud oo ka sii yaab badan, ma seegi kartid, shaki la'aan.
Shaki kuma jiro in uu yahay qoraal ka soo baxay quruxdiisa. Waa far ka timi qoyska farta lagu qoray, ama loo yaqaan farta gacanta lagu nashqadeeyo, sida kan caadiga ah ee aynu naqaano. Markaa waa far la yaab saaxiibtimo iyo xalaalnimadeedaIntaa waxa dheer, dhinac kale ama sifo kale oo aad loola yaabay far-qoristan ayaa ah in uu yahay mid hadda jira oo casri ah in kasta oo uu leeyahay macnayaal qadiimi ah ama qadiimi ah. Waa xaraf ka caawin doonta mashaariicdaada inay si aad ah u soo baxaan, iyo in ka sii badan, waxay ka dhigi doontaa iyaga xitaa xiiso badan.
Haddi wejiga u eg joomatari ee aynu hore u soo sheegnay uu ku xiiso galiyay, ma rumaysan kartid farta soo socota. Waa Lombok, oo ah far, taas oo ay sabab u tahay qaababkeeda, u taagan xarriiq kasta oo loo qaabeeyey qaab joomatari ka duwan oo aad u gaar ah. Waxa loo tixgaliyaa xarfo serif ah, in kasta oo aanay lahayn serif-ga caadiga ah iyo kuwa loogu dhawaaqo ee aynu naqaanno oo aynu ku aragno xarfaha Roomaanka ama la jeexjeexay, haddana waxa ay qaabaynteeda ku leedahay serif casri ah oo caddaalad ah. Dhinac aan shaki ku jirin in ay ka tagi doonto cid kasta oo u arka in ay ka wakiil tahay mid kasta oo dhexdhexaad ah oo afka furan.
Koliko waa far qoraal ah oo lagu garto inuu ka kooban yahay dabeecad aad u xiiso badan oo Laatiinka ah. Waa far, nashqaddeeda awgeed, ka kooban dhiirranaan sifadeeda iyo qaababkeeda u gaar ah oo ka soocan inta kale. Waa far ku habboon haddii aad raadinayso weji-qoraalka oo maamula si loo muujiyo ciwaanka mashruucaaga ama naqshaddaada, kani waa qoraalkaaga ugu habboon Intaa waxaa dheer, iyada oo ay ugu wacan tahay qaabka la xoojiyay, waxaad xitaa isticmaali kartaa si aad u muujiso ereyo yaryar ama xarfo lagama maarmaan ah. Ma lumin kartid aragtida naqshaddan geesinimada leh, oo aad shaki la'aan ugu baahan doonto liiskaaga.
Olivia waa mid kale oo ka mid ah wejiyada cursive, kaas oo lagu garto in lagu naqshadeeyay gacan. Si ka duwan kuwa kale, waxay ilaalisaa qaab adag oo deggan, qoraal xiiso leh oo nadiif ah oo aad ku daryeesho shaqadaada si xirfad leh. Intaa waxa dheer, nashqaddeedu maaha mid aan la ogaan karin. maadaama ay ilaaliso dabeecadda caadiga ah ee xilligii Renaissance oo ay ku ciyaarto faahfaahinta qaar ka mid ah kuwa caadiga ah ee xilliga hadda jira. Waa wejiga ugu habboon in lagu matalo goob xayaysiis, halkaas oo ujeeddada ugu weyni ay tahay in la soo jeediyo dareenka daawadaha. Ha iloobin iyada sababtoo ah way qumman tahay.
Quando waa nooca ugu fudud uguna dabiiciga ah dhammaan kuwa aan ku tusinnay liiskan. Waxay leedahay qaabab wareegsan oo qaabaynteeda ah, dhinac ka dhigaya far xiiso leh. Waa xarfo serif ah, inkasta oo serifka ay leedahay ay aad u yar tahay loogu dhawaaqo, taas oo ku habboon mashaariicdaada gaarka ah. Intaa waxaa dheer, aad bay u fududahay in la helo oo la soo dejiyo, maadaama aad ka heli karto codsiyada sida farta Google. Ma haysatid cudur daar ah inaadan ku haysan faylkaaga font, sidoo kale waa bilaash, ma waydiisan kartid wax ka fiican.
Haddii aad qaamuuska ka fiiriso ereyga glamor, sawirka wejigan wuxuu ka muuqanayaa cadar kasta ama xayeysiis moodada ah. Waa shaki la'aan, nooca ugu nadiifsan uguna quruxda badan ee aad waligaa arki doonto. Waxa kale oo iska leh qoyska serif, laakiin waxay ka tagtaa tafaasiisha qaar ka mid ah kuwa aadka u caadiga ah ee xilliga hadda jira. Waa far si cadaalad ah u ballaaran, taas oo ka dhigaysa ikhtiyaar suurtagal ah mashaariicdaada ugu xirfadda badan.. Waxaad u isticmaali kartaa labadaba cinwaannada iyo naqshadaha sumadda, oo ah dhinac si fiican u ciyaara oo kaa faa'iideysan doona muuqaal wanaagsan oo heer sare ah ee naqshadahaaga.
Waa xarfo, nashqaddeeda awgeed, waxaan dhihi karnaa inay si aad u wanaagsan isugu geyso calaamad kasta oo ka mid ah makhaayadda raaxada ee Paris. Waa waji aad u nadiif ah oo si fudud loogu shaqayn karo naqshadayntaada. Waxay ka kooban tahay qalloocyo iyo xariijimo lagu saadaaliyay naqshadeeda oo aad u xiiso badan. Cilada kaliya ee jirta ayaa ah in aysan ku jirin calaamado aad u badan, sidaa awgeed waxa ay leedahay oo kaliya jilayaasha ugu caansan. Shaki la'aan, far qoraal ah oo dib kuugu celin doona waagii ugu quruxda badnaa oo kaa dhigi doona mid iftiimaya oo ku riyoonaya weligii.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Qoraallada asalka ah ee cinwaannada